२०७० भाद्र २२ गतेको नागरिक अक्षरमा प्रकाशित संस्मरण -
Posted by umasubedi.blogspot.com at 8:44 PM No comments:
Posted by umasubedi.blogspot.com at 12:47 AM No comments:
Posted by umasubedi.blogspot.com at 11:56 PM No comments:
‘उताबाट आमा रुँदै भन्न थालिन्, पार्वती अहिले नेपाल नफर्की ।…. त्यताबाट कमाएर मेरो खातामा पठाएको जम्मै पैसा तेरा दाइलाई सापट दिएकी थिएँ ।… उसले सबै पैसा ढुकुटीमा सखाप पारेछ ।… तैँले यतिका वर्ष इजरायल बसेर कमाएको पैसा एकै झट्कामा सकियो छोरी । मलाई माफ गरिदे ।’ उमा सुवेदीको उपन्यास तोदाका करिब करिब अन्तिम वाक्य यिनै हुन् र उपन्यासको केन्द्रीय मर्म पनि । इजरायलको बेन्गोरियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल फर्कंदै गर्दा आमाको फोनबाट उपन्यासकी मुख्य पात्र पार्वती जे सुन्दै छे, त्यसले भन्छ– नेपाली समाजमा जन्म र संस्कारगत सम्बन्धका रेखाहरू मेटिँदै जान थालेका छन् र मुद्रा बजारले सिर्जना गरेका सम्बन्धका रेखाहरू धारिला र खिरिला बन्दै छन् । पहिले पारिवारिक आर्थिक भार उचाल्ने ठेकेदार जन्मैदेखि छोरालाई मात्र ठानिन्थ्यो र असमथ्र्यतामा उसलाई नामर्द उपमा दिइन्थ्यो । समाजका परम्परा बदिलिँदै गएपछि छोरीहरू पनि आर्थिक भार उचाल्न विदेशिनसमेत थाले र उनीहरूले पराइ भूमिमा कमाएर पठाएको पैसा मर्दहरूले ढुकुटी खेलेर सकाउन थालेका छन् । समाजको बदलिँदो यो चित्र तोदाले प्रस्तुत गरेको छ र तोदाले व्यक्त गरेको नयाँ कथा पनि यही हो । यसप्रति तोदालाई बधाइ भन्नै पर्छ ।
सफलता भनूँ वा असफलता एउटा किताबले भन्दा एउटा जीवनले सिकाउन सक्छ । उपन्यासकी लेखिका उमा सुवेदी आफैँ रोजागरीका सिलसिलामा इजरायल बसेर फर्केकी हुन् र उनले उपन्यासमा दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले थोपरेको हिंसाका सिकार वृद्धाहरूसँग साक्षात्कार गरेकी छिन् । युद्धको सिकार केटाकेटीमै भएका यहुदी वृद्धाहरूको जीवन र उनीहरूको मुर्छालाई पुस्तकमार्फत उमाले ल्याएकी छिन् यो उनको सफलता हो । अनि अर्काे कुरा, भूमि जुनसुकै होस् युद्धका दर्द र रंगहरू उस्तै हुनेरहेछन् र युद्धले टेकेको जमीनमा समान रूपमा बेचैनी र करुणाका सुस्केराहरू मात्रै फुल्दा रहेछन् । इजरायलमा ओइलिँदै गरेका वृद्धाहरू र नेपालमा भर्खर युद्ध भोगेर इजरायल पसेका नारीहरूको मनोविज्ञानमा त्यही एउटै रंग फेला परेको छ तोदामा ।
कथाकी मूलपात्र पार्वती नेपालमा पनि युद्धले परिवार जर्जर भएपछि जीवनबाट खुब थाक्छे । बाबु सैनिक कारबाहीको सिकार हुन्छन् र भाइ परिवर्तनका लागि युद्धमा लागेकै बेला मारिइन्छ । व्यथित पार्वती रोजगारीका लागि राजधानी पस्छे र त्यहाँ पनि रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गाउँकै ‘भलादमी’बाट बलात्कृत हुन्छे । मेहेनतबाट सुख खोज्न ऊ इजरायल पुग्छे र त्यहाँ हिटलरको नरसंहार भोगेका यहुदी वृद्धाहरूको वेदनामय मानसिक विगतबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिलाउन सेवा सुश्रुषा गर्छे । पार्वती पैसा पनि कमाउँछे । देशमा छँदा फक्रनै खोजेको प्रेमको प्रेमी समुन्द्र पार्वतीले उता पैसा कमाएपछि उसलाई प्रभावित गर्छ । नेपाल फर्केपछि बिहे गर्छु भन्छ र पार्वतीको कमाइ हात पार्छ । अनि ऊ अर्कैसँग जीवनसूत्रमा बाँधिन्छ । नेपाल फर्केर एक प्रहरी जवानसँग बिहे गरेपछि पार्वती कमाइको अर्काे खेप पैसा उसैलाई पठाउँछे । माओवादीको सशस्त्र कारबाहीका क्रममा उसको पुलिस पति मारिन्छ र पार्वतीकै खोटो भाग्यले ऊ मारिएको परिवारले ठहर गर्छ । पति मारिएपछि परिवारलाई सुम्पेको पैसाको हकदार पनि पार्वती हुन्न र फेरि ऊ इजरायल नै फर्केर तेस्रो खेप पैसा कमाउँछे, जो आमालाई पठाइएको हुन्छ र दाजुले ढुकुटी खेलेर सिध्याइदिन्छ । छोटकरीमा कथा यत्ति हो ।
कथा भित्रका उपकथाहरूले उपन्यासमा धेरै पात्रहरू जन्माएका छन् जसले विश्वयुद्धका भोक्ता इजरायली वृद्धाहरूको युद्धबाट त्रसित मनोविज्ञान, युद्धकै कारण जवानीमा प्रेम असफल पारिएका वृद्धाहरूको दमित यौन आकांक्षाको विस्फोट, घर छोडेर पराइ भूमिमा बसेका नेपाली नारीहरूको असन्तुलित यौन जीवन र आकांक्षाहरू प्रकट गरिदिएका छन् । नैसर्गिक जैविक आवश्यकतालाई निषेध गर्ने सामाजिक बन्धन र त्यसले आत्मसात गर्न नसकेको परिवर्तनबीचको खाडल पनि उपन्यासमा छ । यौनकाप्रति नेपाली र इजरायली समाजका फरक दृष्टिहरूको झल्को पनि उपन्यासमा छ । एकदिन पार्वतीकी मालिक्नी इनेसकी साथी जुलियतले पार्वतीलाई भनेकी हुन्छे, ‘तँलाई यौन चाहना हुँदैन ? तैँले आफ्नो योनीमा टेप टाँसेकी छेस् ? तेरो खाबेर तँलाई पर्खेर बसिरहेको छ ? त्यसो भए त्यो लोग्नेमान्छे होइन नपुंसक हो ।’ जुलियतले भनेका यी कुरा नेपाली समाजको यौन व्यवहारका ठीकविपरीत लाग्छ पार्वतीलाई र ऊ देख्छे साठी वर्ष उमेर काटिसकेकी मालिक्नी पनि किशोरी प्रेमिकाका झैँ ब्वाइफ्रेन्डसँग मौका पाउनासाथ अँगालो हालिहाल्छे । कोठाभित्र मालिक्नी र ब्वाइफ्रेन्डको आत्मघुलनको सित्कार पार्वती बाहिरै बसेर सुन्छे र अचम्मित हुन्छे ।
उपन्यासमा कमजोरीहरू पनि छन् । विभिन्न ठाउँमा सिर्जित केही पात्रहरू त्यसै बिलाएर जान्छन् र तिनीहरूको उपस्थितिको औचित्य लेखिकाले पुष्टि गर्न सकेकी छैनन् । ती पात्रहरूको उपादेयता गोठका बधुवा गाईलाई फुकाएर जंगल चर्न पठाएजस्तै वा दमित यौन उकुचहरू खोतल्न मात्र काम लागेको प्रतीत हुन्छ । इजारायल पुगेका नारीहरू खास अवसरमा भेला हुन्छन्, मनमा सधैँ लुकाएर राखेका यौनजन्य शब्दहरू प्रयोग गर्न मात्र ती पात्रहरू काम लागेका देखिन्छन् । लोग्ने र ब्वाइफ्रेन्डको फरक अनुभूतिमा उनीहरूबीच भएको संवादमा उपन्यासले एक ठाउँमा भनेको छ, ‘के गफ लगाउँछेस् ? तेरो लोग्नेको तुरी त्यतिन्जेलसम्म त जमेर छुर्पी भैसक्थ्यो होला ।’ तारुण्य अवस्थाको दैहिक आवश्यकतालाई उपन्यासले स्वाभाविक र सहज रूपमा उठाएको छ जो प्रसंशनीय छ । हिन यौन मानसिक विचलनबाट बच्न धेरै नेपाली नारी पात्रहरू ब्यागमा सेक्स टोय बोकेर हिँडेका हुन्छन् जो गर्नै पथ्र्याे ।
तोदाको नेपाली अर्थ धन्यवाद हो । विदेसिएका नेपाली नारीको जीवनमा आधारित, दोस्रो विश्वयुद्धको पीडा र नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र युद्धको पीडालाई अन्तरघुलन गरेर तोदा आएको छ । र, त्यसवापत उमालाई पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, ‘तोदा’ ।
Posted by umasubedi.blogspot.com at 11:50 PM No comments:
Posted by umasubedi.blogspot.com at 11:48 PM No comments:
Posted by umasubedi.blogspot.com at 11:44 PM No comments:
नेपालमा दसैँको चहलपहल सुरु भइसक्यो होला । रेडियो र टेलिभिजनमा मालश्री धुन बज्न थाल्यो होला । लामो दूरीका बसहरु बुक भइसके होलान् । विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादनका विज्ञापनमा नयाँ नयाँ उपहार योजना ल्याएर उपभोक्ता तान्ने कसरत सुरु गरे होलान् । छुट्टी लिएर देश, विदेशबाट गाउँघरतिर फर्किनेहरुको लर्को बढ्दै होला । सहर बजारतिर किनमेल गर्नेको भिड बढेको होला । टेलरहरुले नयाँ अडर क्लोज गरे होलान् । बूढी आमैहरु पिँढीमा बसेर सहरिया छोराछोरी अझैसम्म नफर्केकामा खुइय गर्दै होलान् । कोही कोही हातले घामको टहक छल्दै पर पर बाटामा हिँडिरहेकाहरुलाई आँखा झिमिक्क नपारी हेरिरहेका होलान् । कोही भने वर्षौंपछिको भेटमा हर्षका आँसु बगाइरहेका होलान् ।
तर इजरायलको यो होलोन सहर जस्ताको तस्तै छ, बिलकुल बेपर्वाह । मानिसहरु उसै गरी काममा गइरहेका छन्, फर्किरहेका छन् । सडकमा गुड्ने गाडी पनि उस्तै छन् । बाटाका छेउमा ठिङ्ङ उभिएका जैतुन र खजुरका रुखहरु केही थाहा नपाएझैँ उभिएका उभियै छन् । पानीको फोहोरा उसै गरी फिँज काडिरहेको छ । पार्वतीलाई यी सब लाटाजस्ता लाग्छन् । सबैलाई झङझङ्ग्याउँदै सोध्न मन लाग्छ उसलाई-
‘के तिमीहरुलाई दसैँ आएको पनि थाहा छैन ?’
पोहोरको दसैँमा ऊ किकार वाइजमेन पार्कको एक कुनामा रहेको खजुरको रुखको फेदमा छलिएर खुब रोएकी थिई । बाटामा हिँड्दा पनि ऊ थाहै नपाई रोइरहेकी हुन्थी । मानिसहरु आश्चर्य मानेर ऊतिर हेरिरहेका हुन्थे ।
यसपालि पनि उसको मुटुमा पहिरो त गएकै छ तर आँखामा बाढीचाहिँ पसेको छैन । उसलाई बानी पर्दै छ ।
घटनास्थापना सुरु भैसकेको छ । यो दसैँमा पार्वतीले चार दिन बिदा मिलाएकी छे । दसैँ बिदा बस्नकै लागि उसले पुरानो बिदा सञ्चित गरेर राखेकी थिई । यी चार दिन अपार्टमेन्टमा साथीहरुसँगै बसेर विभिन्न ठाउँ घुमेर बिताउने उसको योजना छ ।
इनेसले भने अँध्यारो अनुहार बनाइन् । उनले भनिन्, ‘अब चार दिन कसरी बिताउने ?’
पार्वतीले इनेसलाई सम्झाइबुझाइ गरी । उसले ठट्यौलो पारामा भनी-
‘साप्ता -हजुरआमा), मैले तिमीलाई धेरै हेरेँ । यसपालि तिम्रो देश पनि हेर्छु । तिम्रो देश तिमीजस्तै मायालु छ कि छैन, मलाई बुझ्न मन छ ।’
उसको कुरा सुनेर इनेस मुसुक्क हाँसिन् । अनि तुरुन्तै भावुक भएर भनिन्-
‘जाऊ, तर छिट्टै आऊ है । म तिमीबिना एक्ली हुन्छु । साराको घरमा रमाउनै सक्तिनँ म ।’
उसले इनेसलाई चार दिनका लागि चाहिने सरसामानहरु एउटा ब्यागमा मिलाएर राखिदिई ।
भोलिदेखि चार दिन साराकहाँ पाहुनाजस्तै भएर बस्नुपर्ने भएकाले इनेस रातभरि निदाउन सकिनन् । छोरीको घरमै जाने भए पनि उनी खुसी थिइनन् । तर छिनछिनमा पार्वतीलाई उपदेश भने दिइरहेकी थिइन्-
‘धेरै बाहिर नहिँड्नू । घाममा निस्कँदा सनकि्रम लगाएरमात्र निस्कनू, नत्र छालामा दाग आउँछ । पैसा गोजीमा राख्नू, धेरै पैसा नबोक्नू । धेरै पैसा छ भने धेरै नै खर्च गर्न मन लाग्छ ।’
पार्वतीले आमालाई सम्झी । उसकी आमा पनि त उसलाई यसरी नै अर्ती दिन्थिन् ।
आमाहरु कति राम्रा ।
लेभिन्स्की पार्क इजरायलस्थित नेपालीहरुको भेटघाटस्थल थियो । यो केन्द्रीय बसस्टेसन तखाना मार्काजितको नजिकै थियो । हार्चियोन र लेभिन्स्की रोडको कुनामा त्रिकोण परेर यो पार्क बसेको थियो । यत्रतत्र नेपाली नै नेपालीमात्र छरिएका देखिन्थे । नजिकै रहेको चाइनिज मार्केटको होहल्लाले असन बजारलाई सम्झाउँथ्यो ।
इजरायलमा काम गर्न बसेका केयर गिभरहरुको अपार्टमेन्ट तखाना मार्काजित नजिकै थियो । टाढा टाढा काम गर्नेहरुलाई बेलुका यहाँ आइपुग्न सजिलो थियो । शारीरिक रुपले सबल रहेका वृद्धाहरुकहाँ लिभआउट केयर गिभरहरु बस्छन् । तिनीहरु आठ घण्टा ड्युटी गर्छन् र साँझतिर हतार हतार आफ्नोे अपार्टमेन्टमा आउँछन् । अपार्टमेन्टको बहाल, खानपिन गाडीभाडा लगायतको खर्च आफ्नै गोजीबाट गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता केयर गिभरको बचत कम हुन्छ । हिँड्डुल गर्नसमेत अर्काको भर चाहिने वृद्धाहरु लिभइन केयर गिभर राख्छन् ,जसले चौबीसै घण्टा वृद्धाकै वरिपरि रहनुपर्छ । यस्ता केयर गिभरलाई बिदा अत्यन्तै कम हुन्छ तर आर्थिक बचत निकै हुन्छ । वृद्धाकै फ्ल्याटमा बस्ने, उनीसँगै खाने र बाहिर घुमफिर पनि नहुने भएपछि यिनीहरुले छिट्टै सम्पत्ति जोड्छन् । अझ बिदाका दिन पनि काम गरेबापत अतिरिक्त भत्ता पनि पाउँछन् । त्यसैले इजरायली केयर गिभरको उद्देश्य हुन्छ- सकेसम्म अशक्त वृद्धाको सुसारे बन्ने ।
पार्कको छेवैमा टेलिफोन बुथहरु थिए । हरेक बुथमा नेपाली केयर गिभरहरुको घुइँचो थियो । बुथमा एक छिन उभिएर सुन्यो भने थाहा हुन्थ्यो, कसले इजरायलमा पहिलो दसैँ मनाइरहेको छ र कसले दोस्रो, तेस्रो या चौथो । पुरानाको आफन्तसँगको वियोगको घाउमा खाटा बस्न थालेको देखिन्थ्यो । नयाँहरु भने वियोगको लप्काले डढेको अनुहार लिएर छटपटाइरहेका थिए । पुरानाहरु कोही चिल्ड्रेन पार्कको पिङमा मच्चिरहेका थिए । कोही हुन्डीवालाहरुसँग पैसाको कारोबार गरिरहेका थिए । कोही समूह बाँधेर पिकनिकमा रमाइरहेका थिए । नयाँ केयर गिभरहरु भने रुन्चे अनुहार लिएर यो सब नियालिरहेका थिए । कोही फूलको बोटमा छेलिएर एक्लै बसेका थिए, कोही फोनको रिसिभर कानमा अड्याएर रुँदै नेपालमा रहेका परिवारजनसित कुरा गरिरहेका थिए ।
फोनमा कोही आफ्नी बूढी आमालाई फकाउँदै थिए । कोही आफ्ना सन्तानको तोतेबोली सुनेर मर्माहत थिए । कोही आफ्ना श्रीमान्सँग निष्ठुर रातका सुस्केराहरुको बयान गर्दै थिए । कसैलाई डर थियो, पाँच वर्षपछि र्फकंदा सन्तानले बिर्सिसक्ने हो कि ? कसैलाई आफ्ना श्रीमान्को माया बाँडिने हो कि भन्ने भयले गाँजेको थियो । आँखामा चमक थिएन, पाइलामा जोस थिएन, मनमा उमङ्ग थिएन । के के न गरुँला भनेर समाज र परिवारसँग विद्रोह गरेर विदेश हान्निएका चेलीहरु त्यस दिन साँच्चै थाकेका थिए । उदास, तेजहीन र हतप्रभ थिए तिनीहरु ।
यतिखेर इजरायली भूमि नेपाली चेलीहरुका आँसुले लफक्कै भिजेको थियो ।
लेभिन्स्की पार्कको रुवावासी हेर्न नसकेर पार्वती फर्केर थिरकुमारीकै अपार्टमेन्टमा पुगी । तर यो सुनसान कोठा उसलाई मसानघाटजस्तो लाग्यो । किनकिन उसलाई कोठाको मौनता भन्दा पार्कको रुवावासी नै ठिक लाग्यो । किनभने, त्यहाँ जीवन थियो । गति थियो । सपनाहरु थिए । रहर र चाहनाहरु थिए । आँसु त थिए थिए, तर सुन्दर भविष्यको कल्पनाले दिने अलिकति हाँसो पनि थियो त्यहाँ ।
एकै छिनमा थिरकुमारीसँगै शान्ति र रिनाहरु पनि आइपुगे । तीन महिनाअघि मात्र इजरायल छिरेकी भावना पनि त्यहीँ आएकी थिई । नेपालमा परिवारसित बसेर मनाएको पोहोरको दसैँ सम्झेर भावना रोएको रोयै थिई ।
भावनाको आँसुसँगै सुरु भयो दसँैको तयारी । सेलरोटी बनाउने चटारो पनि सुरु भयो ।
यत्तिकैमा भावनाको मोवाइलको घण्टीले मौनता भङ्ग गर्‍यो । भावनाले हत्तपत्त उठाइहालिन् ।
तर त्यसपछि भावनाको मुखबाट अर्को शब्द निस्किएन । मोवाइल कानमा पुर्‍याएर हेलो भनेपछि उनले अर्को शब्द निकालिनन् । एकदमै गम्भीर देखिइन् उनी । क्रमशः उनको मुखाकृति बिगि्रन थाल्यो । भावनाको हबिगत देखेर थिरकुमारी पनि आत्तिन थालिन् । भावनाले मोबाइलमा बोल्न नसकेपछि थिरकुमारीले मोबाइल लिएर कुरा गर्न थालिन् । वातावरण एकदमै बोझिलो बन्न थाल्यो । अन्त्यमा फोन राखेर थिरकुमारीले पार्वतीसित बिस्तारै भनिन्-
‘भावनाका श्रीमान् बितेछन् ।’
यतिन्जेल भावना बेहोस भएर ढलिसकेकी थिइन् ।
भावनाका श्रीमान् दुवई गएको सात वर्ष भैसकेको थियो । केही समयसम्म त राम्रै गफगाफ हुन्थ्यो । तर तीन वर्षपछि भने फोनै गर्न छोडे उनले । भावना र छोराको वास्तै भएन उनलाई । पछि पो थाहा पाइन् भावनाले । उनका श्रीमान्ले त दुवईमै अर्को बिहे गरेका रहेछन् । त्यसपछि छोराको भविष्य सम्झेर अनेक मेसो मिलाएर भावना पनि इजरायल आइन् । यति हुँदा पनि उनलाई कुनै दिन सन्तानको मायाले लोग्ने फर्केलान् भन्ने आशा थियो ।
तर अब त्यो आशा पनि समाप्त भएको थियो । उनले रुँदै भनिन्-
‘लोग्ने जहाँ भए पनि सिन्दूर त मैसँग थियो । अब त्यो पनि रहेन । विधवा भएर समाजमा कसरी बाँच्ने ?’
तर थिरकुमारीले भनिन्-
‘पापी लोग्नेकी स्वास्नी भएर बस्नुभन्दा त विधवा भएर बस्नु ठिक ।’
किन भनेकी होलिन् थिरकुमारीले यति कठोर कुरा ? सबै जिल्ल परे । तर पार्वतीलाई थाहा छ थिरकुमारीको कथा र व्यथा ।
मोटो ज्यान, भरिएका गाला र छाती पनि भरिएकै । हाँस्ता काला काला वर्णका गालामा डिम्पल देखिन्थे । थिरकुमारी नामजस्तै थिइन् स्थिर र अविचल । अनुभव र उमेरका कारण उनी सबैकी दिदीजस्तै भएकी थिइन् इजरायलमा । पार्वती त उनलाई दिदी नै भनेर बोलाउँथी ।
सासू, ससुरा र श्रीमान्ले घरसल्लाह गरेरै हाँसीखुसी उनलाई यता पठाएका रे । उनले महिनैपिच्छे पैसा पठाइन् । पैसाको बिटो समाएपछि श्रीमान् लालबहादुर फोनमा निकै बेर गफिन्थ्यो । गफिन्थ्यो के भन्नु, श्रीमतीको चाकरी गथ्र्यो, ‘मैले तिमीजस्ती वीर श्रीमती पाएँ । म कति भाग्यमानी Û तिमीले पठाएको पैसाले सहरमा घरघडेरी किन्छु, छोरा छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउँछु । तिमीले यताको कुनै पिर मान्नु पदर्ैैन । सम्हाल्ने म छँदै छु…… । ‘
लोग्नेका मीठा कुरा सुनेपछि थिरकुमारी भुइँ छाड्थिन्, ‘मेरो लालबहादुर जस्तो असल लोग्ने कसको होला र Û’
एक, दुई, तीन वर्ष बित्यो । थिरकुमारी सहरमा घर किनेको खबर सुन्न आतुर थिइन् । तर लालबहादुरले भने कुनै हतार गरिरहेको थिएन । खै किन किन लालबहादुर र थिरकुमारीबिचको फोन सम्पर्क पनि बिस्तारै पातलिन थाल्यो । पहिले पहिले केशवराज जर्साबकहाँ धाएझैँ दिनहुँ टेलिफोन बुथमा धाएर थिरकुमारीको चाकरी गरेर मात्र फर्किने लालबहादुर अब हप्तामा एक दिन पनि फोनमा आउन छाड्यो । कहिले व्यस्तता र कहिले नेटवर्कलाई दोष दिएर उम्कन थाल्यो । सासूआमै पनि फोनमा थिरकुमारीसित यतिमात्र भन्थिन्-
‘छोराछोरीको पिर नगर् । म छउन्जेल यिनलाई केही दुःख हुँदैन । आफ्नो राम्रो ख्याल गर् है बुहारी ।’
‘पक्कै केही गडबड छ- थिरकुमारी अस्थिर भइन् ।
झापाको बुधबारे माइतमा फोन गरेर भाइलाई मोरङको आफ्नो घरमा कुरा बुझ्न पठाइन् ।
‘भान्जाभान्जीको साह्रै न्यास्रो लागेर आएको’ भन्दै थिरकुमारीको भाइले दुईचार दिन दिदीका घरमा बसेर कुरा बुझेपछि भने बादल हटेपछिको आकाश जस्तो सबै कुरा छ्याङ्ङ भयो ।
श्रीमती बिदेसिएको केही समयसम्म त लालबहादुरले ठिकै ठाउँमा खुट्टो टेकेछ । तर, जब आफूले दुई वर्षमा पनि जोड्न नसकेको सम्पत्ति श्रीमतीले एकै महिनामा पठाई तब त्यसको नसा नसामा मात चढेर खुट्टो लरबरिन थालेछ । नसा नसा हुँदै जब मात दिलसम्मै पुग्यो त्यसपछि त आँखा पनि तिर्मिराए । सही गलत ठम्याउन सकेन । आफ्नो पराई र पराई आफ्नो भयो ।
छोरालाई महँगा पहिरनमा ठाँटिएको देख्दा सुरुमा त आमाका आँखामा पनि भ्रम भयो- होइन, यो मेरै छोरो हो ? तर आमाका आँखालाई कुरा बुझ्न धेरै बेर भने लागेन । भनिन्, ‘हेर् छोरा ! बुहारीले त्यसरी दुःख गरेर कमाएको पैसा हृवारहृवारती नसक् । त्यसका आँसुले सराप्छ कुनै दिन ।’
अर्कैले लखेटी लखेटी पन्जामा पारेको सिकार खोसेर खाएको बाघजस्तो भएको थियो छोरो । आमाका वचनले के छुन्थ्यो । राता आँखा पार्दै सनक्क सन्केर लाग्यो कतैतिर ।
एक दिन भुजेल्नी कान्छीले पल्लो गाउँकी धर्मीसँग पथरी बजारको होटेलमा एउटै प्लेटमा चाउमिन खाँदै गरेको देखिछिन् लालबहादुरलाई । सोझो र सफा मन भएको धर्मीको लोग्नेले कसैलाई बिझाउने कुनै काम गर्दैनथ्यो । धर्मीलाई ज्यादै माया गथ्र्यो । तर धर्मीको परिभाषामा माया भनेको पैसा थियो । राम्रा राम्रा पहिरन र गरगहना थिए । त्यसैले लोग्नेको मायालाई लत्याएर ऊ थिरकुमारीको लोग्ने लालबहादुरसँग लहसिएकी थिई ।
अर्को दिन धने माल्दाइले लालबहादुरलाई धर्मीसँगै दमकको सुन पसलमा देखेछन् । धर्मीले त्यहाँ दुईवटा सुनका औँठी, एउटा सिक्री र चुरासमेत लगाएको माल्दाइले देखे । घर र्फकंदा बाटाछेउको चियाबगानमा शिरीषको रुखमुनि अडेस लागेर लालबहादुर र धर्मीले लाजै नमानी मायाप्रीति साटेको पनि देखे माल्दाइले ।
भुजेल्नी कान्छी र धने माल्दाइको मुखबाट पुत्रको पौरख सुनेपछि आमा घाइते बँदेल्नीजस्ती च्वाँऽऽ गर्दै धर्मीको घरतिर हान्निइन् । त्यति बेला लालबहादुर खरदारको जागिर खान नगई धर्मीका म्याक्सीमुनि पो लुकेर बसेको रहेछ । आमालाई देखेपछि ऊ घर पछाडिको मकै बारीमा लुक्यो ।
ंआमैले दौडेर गई धर्मीको कपालमा समाइन् । एक छिन त धर्मी बोलिन । आफ्ना छोरालाई पानीमाथिको ओभानो ठानेर आफूलाई मात्र धारिला वचनले काटेको काट्यै गरेपछि धर्मीलाई पनि असहृय भयो । उसले ठाडै भनिदिई-
‘ममाथि के थुतुनु चलाउँछ्यौ आमै ! सक्छ्यौ भने बरु आफ्ना छोराको मुतुनुु जोगाऊ न ।’
‘हिलो चलाई मुखमा छिटा’ भन्दै आमा फर्किन् । फर्किंदै गर्दा उनले सुनिन्, ‘तिम्रा छोराले दमकमा मेरा नाममा एउटा घर किन्देका छन् ।’ धर्मीले अरू पनि के के भनी तर आमाले त्यसपछि केही सुनिनन् ।
पतिदेवको लीला सुनेपछि थिरकुमारीले इजरायलकै समुद्रमा आफूलाई विसर्जन गर्ने घोषणा गरिन् । भूमध्य सागरतिर दौडिँदै गर्दा कतिपटक साथीहरुले फकाएर फिर्ता ल्याए ।
समयले उनलाई सबभन्दा बढ्ता फकायो । अहिले उनलाई छोराछोरीको धेरै पिर लाग्छ । भन्छिन्-
‘तिनीहरुका लागि केही खर्चको व्यवस्था गरेर मात्र नेपाल र्फकन्छु ।’
त्यतिखेर उनको भर्खर भर्खर विवाह भएको थियो । उनको लोग्नेले बारम्बार भन्ने गरेको वाक्य उनलाई अहिले पनि प्रस्ट सम्झना छ । ऊ भन्ने गथ्र्यो-
‘तिमी चौपट्टै मायालु छ्यौ । जीवनभरि तिमीलाई माया गर्न पाउँ । तिमीले अरु केही गर्नु पर्दैन । तिमीलाई पाल्ने जिम्मा मेरो हो अब । म जसरी भए पनि खुसी राख्नेछु मेरी प्यारी थिरुलाई ।’
तर अब थिरकुमारीलाईर् लोग्नेका ती वचनहरु मीठो निद्रा बिगार्ने कर्कश आवाजजस्ता लाग्छन् ।
धन्न उनी त्यसैमा मख्ख परिनन् । चुलोचौकोमै आफूलाई सीमित गराइनन् । आफैँले केही गर्ने अठोट गरेर बाहिर निस्किन् । संसार देखिन् । नत्र टाउकामा हात राखेर भाग्यलाई धिक्कार्दै बाँच्नुपर्ने थियो उनले ।
अहिले उनमा आत्मविश्वास बढेको छ । अब उनी लोग्नेको दयाबिनै बाँच्न सक्ने भएकी छिन् । आफ्ना सन्तानको पालनपोषण, उनीहरुको शिक्षादीक्षा र भविष्य नै अब उनको एकमात्र लक्ष्य बनेको छ ।
एक दिन उनले पार्वतीसित भनिन् -
‘प्ाार्वती, अब म त्यसलाई सम्झेर कहिल्यै आँसु झार्नेछैन । एक्ली भएँ भनेर कहिल्यै दुःखी हुनेछैन । बरु मलाई गर्व छ, अब मैले एउटा छाडा पुरुषकी निरीह स्वास्नी भएर आँसु पिउँदै बाँच्नुपरेन । आफ्ना खुट्टामा उभिएर बाँच्न सकेँ ।’
त्यसपछि थिरकुमारीले आफ्नो विगतलाई लिएर गुनासो गरेको पार्वतीले कहिल्यै सुनिन ।
थिरकुमारीले अनेक व्यवस्था गरेर भावनालाई त्यसै रात नेपाल पठाइदिइन् । भावनामाथि आइपरेको अप्रत्याशित आघातले सबैलाई आहत बनाएको थियो । तर थिरकुमारीले सबैलाई सम्झाइन्-
‘अहँ, दसैँका यी दिनहरुमा हामी कोही पनि दुःखी हुनेछैनौँ । सबैले आफ्ना र अरुका दुःखहरु बिर्सिएर रमाइलो गर्नेछौँ ।’
थिरकुमारीको कुरा सबैले माने ।
दशैँको रात झन् झन् गाढा हुँदै गयो । अपार्टमेन्टमा भेला भएका पन्ध्र जना युवतीले अझ जोसिला चुट्किलाहरु, कथा, कहानीहरु एकअर्कालाई सुनाए । त्यस रात कसैले सुत्ने कुरा गरेन । सबैलाई आफ्ना कुरा सुनाउने हुटहुटी थियो । कसैले भने-
‘बाआमाका थाप्लामा रिनको ठूलो भारी थियो, मैले हलुका पारिदिएँ ।’
कोही सहरमा जग्गा किनिसकेको कुरा गर्थे । घरै बनाइसकेकाहरु यो तातो मरुभूमिमाथि चिसा रात बिताउन छोडेर आफ्नै देशको न्यानो अँगालोमा बेरिन आतुर भइरहेका थिए ।
दुःखलाई सजिलै सुखमा बदल्ने आँट थियो सबैमा । कोही नाच्न थाले । कसैले पूर्वेली लोकभाका झिके ।
प्रतिमा आफ्नो स्पेनमा रहेको केटासाथीसँग मोवाइलमा गफिन थालेको झन्डै एक घण्टा भयो । प्रतिमा र सञ्जयले इजरायल आएको केही समयपछि एकअर्कालाई मन पराएका थिए । सबैले भन्थे, ‘कति सुहाउने जोडी ।’ साथीहरुको हौसलापछि उनीहरुले बिहे पनि गरे । केही समयपछि सञ्जय र प्रतिमाले स्पेन जाने र उतै सुखी जीवन बिताउने सल्लाह गरे तर सञ्जयको भिसा लाग्यो । प्रतिमाको अझै भिसा लाग्ोको थिएन ।
बिहे भए पनि प्रतिमा सञ्जयलाई पति, श्रीमान्, बूढो वा पोइ नभनेर केटोसाथी भन्थी । ऊ भन्थी-
‘मैले सुनेकी छु, लोग्ने भन्यो भने मायामा कमी आउँछ रे । पुरानो हुँदै जान्छ रे माया । केटोसाथी भन्यो भने बिहे गर्नुभन्दा पहिलेकै जस्तो झन्झनाहट हुन्छ रे शरीरमा । त्यसैले आफ्नो मायालाई ताजा राख्न र लभ पर्न थाल्दाको पहिलो पहिलो आकर्षण, कौतुहल र समर्पण भावलाई जीवन्त बनाइराख्न केटोसाथी भन्नुपर्छ ।’
रोशनीलाई भने प्रतिमाको तर्क मनै परेन । उसले लाजै पचाएर भनी-
‘के गफ लाउँछेस् ? तेरो लोग्नेको तुरी यतिन्जेलमा त जमेर छुर्पी भैसक्यो होला ।’
रोशनीको कुरा सुनेर सबै गलल्ल हाँसे ।
त्यसपछि रोशनीले हिजो भर्खर नेपालबाट आफन्तले पठाइदिएको छुर्पी सबैलाई बाँडी । सबैले कहिले प्रतिमा, कहिले रोशनी र कहिले छुर्पीतिर हेर्न थाले ।
‘अचेल नीति कतै बेपत्ता भएकी छे अरे नि हौ । कति दिन भैसक्यो अरे अपार्टमेन्टमै नआएकी ।’
रोशनीले अचम्मको कुरा गरेकी थिई । पार्वतीलाई त्यसै बेला नीतिलाई भेटूँ भेटूँ लागेको थियो ।
भोलिपल्टै पार्वती र रोशनीहरु लेभिन्स्की रोड हुँदै होर्चियोनतर्फ बढे । उनीहरुलाई आग्रा-३५ बाट होर्चियोन-३२ मा रहेको नीतिको अपार्टमेन्टमा पुग्न दश मिनेट लाग्थ्यो । उनीहरु नीतिलाई भेट्न निकै उत्साहित थिए । उनीहरुलाई विश्वास थियो । अरू बेला बेपत्तै भए पनि दसैँका बेला पक्कै पनि ऊ आफ्नै अपार्टमेन्टमा भेटिनेछे ।
नीतिको अपार्टमेन्टको गेट खुल्लै थियो । चार तले भवनको पहिलो तलाभित्रको हल्लीखल्ली बाहिरै सुनिन्थ्यो । उनीहरु सरासर कोठामा पसे ।
बैठकमा वरिपरि चारपाँच जना बसेर तास फिट्तै रहेछन् । बियरका बोतल, आधा रित्तिएका ग्लासहरु, भुटेको मासु, साँदेको बदाम र सलाद छेउछेउमा राखिएको थियो । जिउका आधाउधी लुगा गायब थिए उनीहरुका । एउटीले चुरोटको धुँवा मुखबाट फाल्दै प्रस्ताव गरी-
‘अहिले हामी स्वतन्त्र छौँ । त्यसैले आजका दिन मुखमा आए जति
छाडा बोलौँ । कति गुम्सिएर बस्नु, के छाडा शब्द लोग्नेमान्छेको मात्र पेवा हो र ?’
सबै दङ्ग परे । गजबको प्रस्ताव थियो यो । अर्कीले सुरु गरिहाली-
‘मेरो जाँठो लोग्नेले मलाई कहिल्यै माया गरेन ।’
अनि त के थियो र ! सबै जना आफूले जाने जतिका फोहोर र अश्लील शब्दहरु फलाक्न थाले । अर्कीले भनी-
‘मलाई नेपालका लोग्नेमान्छेलाई भन्दा बढ्ता छाडा बोल्न आउँछ । यदि यस्तो बोल्ने कम्पिटिसन हुँदो हो त म फस्टै हुन्थेँ होला । तर के गर्नु, नेपालमा बोल्नै नपाइने । आफूलाई कत्रो रहर थियो ।’
त्यसपछि उसले लहरै फोहोर गालीहरु उच्चारण गर्न थाली ।
तिनीहरुका तातो गफको गन्ध उनीहरुले पिइरहेको बियरको गन्धभन्दा कडा थियो ।
एउटीले भनी, ‘हेर केटी हो ! मेरो त एउटा फिलिपिनोसँग लभ परेको छ । त्योसँग म धेरै खुसी छु । इजरायल बसुन्जेल मस्ती गरिन्छ । पछिको किन पिर लिने ? जे होला होला । बिहे गरेन भने पनि केही छैन ।’
डन्डीफोरका दाग छोप्न अनुहारभरि भद्दा मेकअप गरेकी अर्की बत्तीस, तेत्तीस वर्षकी युवती झन् हौसिई-
‘आफ्नो त यतिका वर्षसम्म बिहे भएन । नेपालमा एउटा ब्वाइफ्रेन्ड थियो, छोडिहाल्यो । यहाँ आएको केही महिनादेखि एग्रिकल्चरमा काम गर्ने हेन्डसमसँग बस्दै छु । बिहे त गर्दैन होला । नेपालमा राम्री श्रीमती र दुई छोरा पनि छन् रे, उसैले भनेको । केही छैन, जिन्दगीको मजा यहीँ
चाख्ने हो । नेपालमा गएर अलिकति पैसाको जाल फालिन्छ, केटा त माछासरि ।’
उत्ताउलो पहिरनमा ठाँटिएकी अर्की युवती बियरले लठ्याएको जिब्रो लतार्दै बोल्न थाली-
‘आफू त गाउँकी केटी । बिए पढ्दै गर्दा बाआमाले बलिया पाखुरा हेरेर एउटा हरितन्नमलाई सुम्पे । पढेर केही गरुँला भन्ने रहर कल्पनैमात्र भयो । लोग्ने महाको जँड्याहा निस्क्यो । अलिअलि भएको मेरो दाइजो र गहनासमेत सकिदियो । सासू उहिलेको जमानाको खुइलेको कुरामात्र गर्थिन्- टाउको ढाकेर हिँड्, काम गर्दा चुरा नबजा, पुरुषहरुसँग हाँसेर नबोल् । के के हो के के । त्यतिमात्र हो र Û अलिकति तलमाथि भयो भने जगल्ट्याउँथिन् । अलच्छिनी, छौँडा, नकचरी भन्थिन् । लोग्नेको माया कस्तो हुन्छ भन्ने थाहै नपाई छोराछोरी जन्मिए । लोग्ने राति रक्सी धोकेर आउँथ्यो र रातभरि कोट्याइरहन्थ्यो । सुत्नै नपाइने । बाध्य भएर माइत आएर बसेँ । आमाले रिन काढेर यता पठाइदिनुभयो । यहाँ आएपछि थाहा भयो- जिन्दगी यति रमाइलो पनि हुँदोरहेछ ।’
तिनीहरुका वीभत्स गफ सुनेर पार्वतीलाई बान्ता आउलाजस्तो भयो । उसलाई एक छिन पनि त्यहाँ बस्न मन लागेन । अरुलाई पनि बस्न मन लागेन । उनीहरु चुपचाप बाहिरिए ।
‘नेपालका बँधुवा गाई हुन् यिनीहरु । यिनीहरुलाई इजरायल पठाएको त गोठमा बाँधिराखेको गाईलाई दाम्लो खोलेर जङ्गलतिर चर्न पठाएजस्तै भएको छ । फुक्काफाल छन् यिनीहरु । यिनका पछाडि उन्मत्त साँढेहरुको लाइन छ ।’ पार्वती एक्लै फत्फताई ।
जवाफमा रोशनीले भनी, ‘त्यसो होइन, यिनीहरु जे गरिरहेका छन्, ठिक गरिरहेका छन् । आफ्नो जिन्दगी आफ्नै हिसाबले बाँच्ने नि । किन अरुको नीतिनियम अनुसार चल्ने ?’
पासाङ रोशनीको कुरामा सहमत हुन सकिन । उसले भनी-
‘हामी एकदुई घण्टा फुर्सद मिल्यो भने पनि पार्टटाइम काम खोज्छौँ र एक एक पैसा जोडेर नेपाल पठाउँछौँ । यिनीहरु हुँदाखाँदाको ओभरटाइम जागिरमा समेत अर्कैलाई पठाएर चटारिएको कोरलीझैँ बहरको मुत सुँघ्दै कुद्छन् ।’
नीति नभेटिएकोमा भने उनीहरु सबैलाई खल्लो लागिरहेको थियो । निस्कनुअघि एउटी केटीले भनेकी थिई-
‘नीति बहुलाइसकी ।’
पार्वतीलाई त्यति बेला चार सय बीस भोल्टको करेन्ट लागेको थियो । पार्वतीलाई नीतिजस्ती हिम्मतिली केटी पनि बहुलाउन सक्छे भन्ने कुरामा पटक्कै विश्वास थिएन ।
उसले रोशनीसित भनी-
‘पोहर साल त हो नि, उसको लोग्नेले लागुपदार्थ किनबेचको आरोपमा साउदीमा फाँसीको सजाय पाएको । नीति त्यति बेला पनि बहुलाइन । उसले सही आफूमाथि परेको विपत्तिलाई । छोरीका लागि हरेक पीडा सहन तयार छु भन्थी ऊ । अहँ, नीति बहुलाउन सक्तिन ।’
रोशनीलाई पनि पार्वतीको कुरा हो कि जस्तो लाग्यो ।
Posted by umasubedi.blogspot.com at 10:38 PM No comments: